नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस फैलिँदै, नेपाल जोखिममा : RajdhaniDaily.com - नेपाली चलचित्र
Home भर्खरै नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस फैलिँदै, नेपाल जोखिममा
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेका अनुसार भाइरसले पटक पटक म्युटेसन हुने र आफूलाई अपडेट गरिरहन्छ । उनले भने, ‘यो कोरोना भाइरस नै हो, अर्को नयाँ भाइरस होइन । भाइरस पटक पटक म्युटेसन हुन्छन् र आफूलाई अपडेट गरिरहन्छन् । यसअघि पनि २३ पटक नोबेल कोरोना भाइरसको म्युटेसन भएको थियो । कोरोना भाइरसको त ४ हजार पटकभन्दा धेरैपटक म्युटेसन भएको छ ।’ नयाँ स्वरूपको भाइरस निकै छिटो सर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने बेलायती अधिकारीले बताएका छन् ।
भारतमा पनि नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस देखिएको छ । खुला सिमानाका कारण नेपाल जोखिममा छ । सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गरेर तयारी थाल्नुपर्छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेले भने, ‘यो प्रजातिको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि आउन सक्ने सम्भावना छ । अनिवार्य रूपमा सही तरिकाले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने, भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा मात्र भेटघाट गर्ने तथा हात नियमित रूपमा धुने गरेमा हामी यो भाइरसबाट बच्न सक्छौं । यसको घातक प्रभाव कम भएकाले डराउनुपर्दैन ।’ हाल सरकारले बेलायतबाट आवतजावत बन्द गरेको छ ।
आत्मानुशासन नहुँदा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने खतरा बढेको छ । व्यक्ति स्वयं सचेत नहुँदा र सरकारले हेलचेक््रयाइँ गर्नेमाथि कारबाही नगर्दा जोखिम थप बढेको हो । केही दिनयता परीक्षण घट्दा संक्रमितको संख्या घटेको देखिएको छ ।
अहिले दैनिकजसो प्रदर्शन, जुलुस र सभा गर्न थालिएको छ । जुलुसमा कुनै व्यक्तिमा संक्रमण देखिए आम व्यक्ति प्रभावित हुनेछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल अझै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोना जोखिम अझै कायम छ । उनले भने, ‘हिँड्दा, बस्दा र काम गर्दा एक अर्कालाई संक्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दुरी कम्तीमा २ मिटर कायम गरौं । सधैं समुचित तरिकाले मास्क प्रयोग गरौं ।
हातको सरसफाइमा ध्यान दिऔं । हातले नाक, मुख र अनुहार छुने बानी हटाऔं ।’ उनले व्यक्तिको यस किसिमको बानी सुधार भए कोरोना संक्रमणबाट मात्र नभई धेरै किसिमका सरुवा रोगबाट बच्न सकिने बताए ।
बुधबार देशभर ५ सय ११ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६० हजार ५९ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार ५ हजार १ सय १० जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । बुधबार थप ७ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ८४७ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार ६ सय जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ हजार ३ सय रहेको छ ।
छाडेकाे श्रीमानकाे खुकुरी प्रहारबाट मृत्यु
साेलुखुम्बु। सोताङ गाउँपालिका–३ मा पूर्वपतिको खुकुरी प्रहारबाट पत्नीको ज्यान गएको छ । उनन्तीस वर्षीय पूर्वपति होमबहादुर राईको खुकुरी प्रहारबाट २८ वर्षीया सोमा लामाको घटनास्थलमै...
प्रदेश ५ Sushila Bishwokarma - May 18, 2020 0
रुपन्देही । उपचारका लागि भर्ना भएका गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाका एक शिक्षकमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल बन्द गरिएको छ । यही जेठ १...
बम विस्फोटको जिम्मा विप्लवले लियो
प्रदेश ७ Prem Shyangtan - March 20, 2020 0
बाजुरा(मार्तडी) । चैत्र ३ गते जगन्नाथ गाउँपालिकाको गेट नजिकै बम विस्फोट गराएको जिम्मेवारी विप्लप समूहले लिएको छ । सरकारद्धारा प्रतिबन्ध गरेको नेत्र विक्रम...
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - October 13, 2020 0
अर्थ कौशिला कुँवर - March 22, 2021 0